I-Monarc la Playa - I-Airbnb
I-Monarc la Playa
Uza kuyithanda iMonarc La Playa ngenxa yezinto zethu eziyimfihlo. Igumbi ngalinye elicocekileyo lingenasiphazamiso linebhedi enkulu. Ii-verandahs ezigqunyiweyo zilungele ukuphumla nge-margarita entsha okanye ikomityi yekofu yasekuseni. Ukutya kwaselwandle okuvela kwiintsuku ezibanjiweyo kulungiselelwe ngobuchule ngabasebenzi bethu abakho ukuze bahoye zonke iimfuno zakho. I-Monarc La Playa yindawo yokuphumla engathethekiyo. Iholide yabantu abathandanayo, ukusefa kubantu abathanda izinto ezingaqhelekanga, indawo ethe cwaka yabahambi bezoshishino, kwaye ilungele iindibano ezinkulu nemicimbi ekhethekileyo.
Ngoxa uhlala eMonarc La Playa, injongo yethu kukwenza ube nexesha elimnandi wena neqela lakho. Ukususela ekulungiseleleni ukudluliselwa kwisikhululo seenqwelo-moya, ukuya ekulungiseleleni isidlo kunye nokulungiselela ugqirha wokuphulula izihlunu ekhaya, injongo yethu kukuqinisekisa ukuba ixesha lakho kunye nathi liza kuba "lichithwa kakuhle".
Ikhitshi lethu alifumaneki ukuba lisetyenziswe ziindwendwe, ngoko ke isicwangciso sethu esipheleleyo sokutya senzelwe ukukunika eyona pampering. Sinikezela ngeenkonzo zabapheki kuzo zonke izidlo zakho ngemali efanelekileyo yomntu ngamnye/ngosuku. Emva kokuba wenze isigqibo ngokutya okuthandayo, siza kukuvuyela ukuqokelela ezi ndleko zongezelelekileyo xa ufika kwindawo yakho.
Vumela omnye umntu ahoye iinkcukacha ngoxa uphumle.
Sikhangele phambili ekukwamkeleni kungekudala.
Into eyenza yahluke le ndawo kukuba selunxwemeni. Eyethu ayicocekanga ngabantu abaninzi ibe uza kuziva ngathi ungumnikazi wayo yonke.
Abasebenzi bethu bayafumaneka ukukunceda ulungiselele uhambo, ezothutho kunye nokutya.
Umphathi wekhaya lethu ukwindawo yakho ukuze ukhuseleke kwaye kube lula kuwe.
Sinompheki onokulungiselela zonke izidlo zakho.